मनकामना केबलकार खुल्यो - केन्द्र खबर । केन्द्रभाग मिडिया प्रा.लि.
मनकामना केबलकार खुल्यो
२०७८ भदौ २० ११:०२ मा प्रकाशित
मनकामना केबलकार आजबाट खुलेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेपछि बन्द भएको केबलकार आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको हो । गोरखामा निषेधाज्ञा हटेलगत्तै केबलकार पुनः सञ्चालनमा आएको हो ।
निषेधाज्ञासँगै गएको वैशाख १६ गतेबाट केबलकार बन्द भएको थियो । केबलकार बन्द हुँदा मनकामना जाने दर्शनार्थी समेत निकै कम भएका थिए । मनकामना क्षेत्रका सयौं व्यवसायी प्रभावित भएका थिए । हजारौंको रोजगार प्रभावित भएको थियो ।
मनकामना केबलकार पुनः सञ्चालनमा आएपछि त्यस क्षेत्रको व्यवसाय पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ ।
जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय अनुसार केबलकार सञ्चालनमा आए पनि पूजा भने मन्दिर बाहिरबाटै गर्नुपर्नेछ । केबलकार चढ्न जानेले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रालीले चितवनको कुरिनटारबाट गोरखाको मनकामना मन्दिरसम्म केबलकार सञ्चालन गर्दै आएको छ । संक्रमणको जोखिम मध्येनजर गर्दै भक्तजनलाई बाहिरबाटै पूजाको व्यवस्था मिलाइएको मन्दिरका मूलपूजारी इनसान थापाले जानकारी दिए ।
बुद्धभूमि हाइड्रोपावरको आइपिओ असोज ११ गतेदेखि खुल्दैँ
२०७८ अशोज ३ १४:३७ मा प्रकाशित
कानुन नबन्दा एक वर्षमा पनि गुडेन रेल
२०७८ अशोज २ ११:०१ मा प्रकाशित
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ महाधिवेशन : सदस्य पदका उम्मेदवार बाँस्तोला भन्छन् : व्यवसायीलाई प्रविधिसंग जोड्छु
२०७८ भदौ २९ १४:०१ मा प्रकाशित
राष्ट्र बैंकले दशैं-तिहारका लागि नयाँ नोट पठायो, कहिले र कतिसम्म साटही गर्न पाइने ?
२०७८ भदौ २८ १२:३३ मा प्रकाशित
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघमा फर्निचर समिल बस्तुगत समिति गठन
२०७८ भदौ २७ १६:३१ मा प्रकाशित
२०७८ भदौ २५ १२:५२ मा प्रकाशित